news – B2b en-Trade
Business confidence up in all states and industries, bitcoin streaks to record high | Finance Report
As Australia emerges from lockdown, business confidence has risen toanear record high. Here’s Alan Kohler on more, why he expects inflation to go up. Subscribe: Read more here: ABC News provides around the clock coverage of news events as they break in Australia…
Founder and CEO of The Business of Fashion Imran Amed steps into the virtual realm with the pioneering entrepreneurs behind Ledger, The Dematerialised and RFTKT Studios to discover why the metaverse is being seen as the next fashion goldmine. Visit for fashion news, analysis and business intelligence from…
Business Round Up (12 November 2021) =========== – တရုတ်နိုင်ငံက သူ့ရဲ့ BRI စီမံကိန်းကို စစ်ကောင်စီရဲ့ အာမခံချက်နဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေ။ – တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်း Menga ဆိပ်ကမ်းကို ယာယီ ပိတ်ထား။ – ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်အချို့ကို သွင်းကုန် လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မယ်။ – ကြက်သွန်နီဈေးနှုန်းတွေဟာ ၃ ပုံ ၁ ပုံလောက်အထိ ကျဆင်းနေ။ – ကုလားပဲ လက်ကျန်များနေပြီး ဈေးနှုန်းကျဆင်း။ ———————— လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရေး မဇ္ဈိမကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့…